के तपाई उचाई कम भएर टेन्सनमा हुनुहुन्छ ? अब यसो गर्नुस उचाई बढाउन – Halkhabar kura
९ माघ २०७६, बिहीबार १०:३२
के तपाई उचाई कम भएर टेन्सनमा हुनुहुन्छ ? अब यसो गर्नुस उचाई बढाउन
एजेन्सी । मान्छे निश्चित उमेरपछि बढ्न बन्द हुन्छ भन्ने गरिन्छ । तर विज्ञहरु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरु भन्छन् केही यस्ता एक्सरसाइज छन् जो नियमित गर्ने हो भने शरीरको लम्बाई बढाउन मद्दत गर्दछ ।
शरीरको लम्बाइ बढाउनका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय हो स्किपिङ । जसलाई हामी सामान्य भाषमा डोरी खेल्ने पनि भनिन्छ । यसको माध्यामबाट शरीरमा रक्त संचार सही बनाइराख्छ जसले शरीरको हड्डीको लम्बाई बढाउन निरन्तर दबाब बनाउनेछ ।
यसका साथै बास्केटबल खेलले पनि शरीरको लम्बाइ बढाउन मद्दत गर्दछ । शरीरको लम्बाइ बढाउने अर्को उत्तम उपाय हो पौडी । दैनिक २ घण्टा पौडी खेल्ने हो भने लम्बाई बढाउन काफी मद्दत पुग्ने विज्ञहरुको भनाई छ । कोब्रा स्ट्रेच अर्को महत्वपूर्ण कसरत हो ।
यसका लागि जमिनमा उल्टो पल्टिएर हातलाई जमीनमा टेकाउनुपर्छ । यस दौरान हात तपाइको पेटको भागको नजिक हुनु आवश्यक छ । फेरि शरीरको अगाडिको भाग विपरित दिशाामा स्ट्रेच गर्नुपर्छ । यसलाई कम्तीमा ३ देखि ४ पटक दोहोर्याउनुपर्छ ।
Previous प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र हिब्रु राइटर्स एसोसिएसनबीच सम्झौता
Next अमला खानुका फाईदा यस्ता छन् जानीराख्नुस